Maalinta Cudurka Kaankarada ee Maqaarka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maalinta Cudurka Kaankarada ee Maqaarka
La daabacay måndag 7 maj 2012 kl 10.27
Maanta ayaa ku beegan maalinta cudurka kaankarada ee maqaarka (Maalinta isniinta ee Melanoma), middaasina macnaheedu tahay in dhammaan waddammada Yurub laga xuso maalinta kaankarada malignt melanom iyo kaankarooyinka kale ee maqaarka. Malignt melanom, ahna kaankarada maqaarka middeeda ugu xun ayaa la saadaalinayaa inay kor u kacdo una geeriyoodaan dad tiradoodu gaarsiisan yihiin 500 dalkan oo keliya. Waa tiro ka fara badan marka loo barbar-dhigo dadyowga u geeriyooda shilalka gaadiidka.
Muhiimadda laga leeyahay maalinta Isniinta Melanoma ayaa ah sidii looga hor-tegi lahaa, horena loogu ogaan lahaa kaankarada maqaarka iyo in sidii bulshada loogu war-gelin lahaa khatarta shucaaca qorraxda oo la isku dhigo. Labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey ayay kaankarada maqaarku noqotay midda ugu kor u kicidda badan ee noocyada burooyinka kaankarada.
Maanta ayey dhammaan u furan yihiin goobaha daryeelka caafimaad ee maqaarka in dhammaan ciddii dooneeysa iska baarto burooyinka dushooda ku yaala iyo is-beddellada maqaarkooda. Waana maalinta keliya ee aadan caddeeyn uga baahnayn inaad kala timaaddo bukaan-socodka xaafaddaada si laguu qaabilo.